Pambolena fanaovam-panavotana, indostria fanaovam-panavotana, Tractor Seza - TFS
Pictures of orinasa
TFS, dia mampiseho vondrona orinasa ao Shina, anisan'izany ny seza & singa faritra mpamokatra, mahatonga malalaka tsipika ny seza mety ho samy hafa karazana fiara, anisan'izany ny traktera, fambolena, Fanorenana, indostria, Lawn & Garden, Professional Turf, ary Utility fitaovana fampiharana. Ny seza ahitana tsipika fiteny maro samy hafa seza malaza ary koa ny sasany amin'ireo seza ankehitriny teti-dratsy amin'ny endri-javatra tsy manam-paharoa endriny sy ny
Ny matanjaka ara-teknika ekipa niasa nandritra ny 20 taona ny seza famokarana tantara, ka ny seza farany famolavolana sy amin'ny andro izany hatrany mba hanitatra ny famokarana fahafahana. Androany telo karazana-pamokarana ho an'ny mandroatra, indrindra fa hita taratra amin'ny alalan'ny teknolojia namakiana amin'ny novolavolaina lamba nanohana vinyl izay ampiharina ho an'ny kilasy ambony seza. Ny famokarana ahitana tsipika tanteraka ihany koa ny fanodinana ny seza, toy ny, machining, nohitsakitsahiko, ary koa ny welding, mandoko, fiangonana. Raha tsy voalaza etsy ambony, tooling dia atao amin'ny tenantsika, misy lehibe nohitsakitsahiko, plastika & sombin-javatra lasitra.
Ny vokatra manondrana any Etazonia, Japana sy ireo firenena hafa, tamin'izany andro izany asa miaraka amin'ny milina fambolena an-trano lehibe fitaovana orinasa.
Ny toerana dia be nampiasaina tamin'ny fambolena, fanorenana, TAOZAVA-BAVENTY, bozaka & zaridaina, mifanaraka amin'ny famolavolana farany ny tsara tarehy, aina, ny fiarovana sy ny fanararaotana withstanding andavanandro sy ny fepetra mafy ny tontolo iainana.
Ny orinasa dia certificated ISO9001 fitsipika, ary ny taona fanamarinana, mba ho azo antoka ny toerana foana ny toetra tsy tapaka izay takian'ny OEMs.
Laboratoara mizaha toetra dia afaka hihaona ny fizahan-toetra ny seza, anisan'izany ny hery, mamiravira, sira dipoavatra, UV, flammability, abrasion, durometer naka fanahy, sns
Raha mitady kalitao azo antoka sy mpamatsy, na liana amin'ny iray amin'ireo vokatra, dia mifandraisa ny ekipa mba hahazoana izay ilainao.
10 Oktobra 2019 New CNC mifehy mihaohao milina ho an'ny koronosy tonga an-workshop.CNC dia be kokoa ny vokatra fampandrosoana fahaizana sy ny fampandrosoana haingana, mba hanampiana ny fampandrosoana ny orinasa 02 Nov. 2019 T ...
© Copyright - 2010-2019: All Rights Reserved. Featured Products - Hot Tags - Sitemap.xml - DIEM Mobile
Vip Mpandeha Seza , Rear Seza , Universal Seza Slide dalamby , Anti-Slip Gun mikendry Seza , nofonosiny Seza , Hardware Torsion Metal Clamps Wire ,